ဒီတကြိမ် Give meabreak! အစီအစဉ်မှာ မှတ်သားစရာအဖျာဖျာ ကိုကောက်နူတ်တင်ပြသွားချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေ၊ ကိုယ်ရရှိခဲ့တဲ့အယူအဆ တွေ ပေါ်အခြေခံပြီး ရရှိလာခဲ့တဲ့မှတ်ချက်တွေဖြစ် ပါတယ်။ အဲဒါတွေကိုမှတ်ရသားရတာပျော်စရာပါ။ ဒါ့အပြင် အဲဒီထဲမှာ ဆုံးမစကားတွေလဲတွေ့ရတယ်။ သက်ကြီးစကားသက်ငယ်ကြား ရပါသတဲ့။ ငွေစင်ရော် ရဲ့နှလုံးသားထဲကိုဝင်လာခဲ့တဲ့ အမှတ်တရ တွေလို့ပဲ ဆိုကြပါစို့။
နှစ်သစ်ဦးချစ်ဦးလက်ဆောင် (ဦးဘသော်) စာအုပ်တွင် ဖော်ပြထားသော (ဒေါ်) ခင်မျိူးချစ် ၏ အမှာစာ ဖြစ်ပါသည်။
ကဗျာဟူသည် နှုတ်တိုက်ရွတ်ဆို-သီဆို၍ အရသာခံဖို့ကအဓိကဖြစ်သည်ဟု စာရေးသူယူဆသည်။
စာရေးသူကိုယ်တိုင် မြန်မာကဗျာ အင်္ဂလိပ်ကဗျာများကိုငယ်စဉ်က နှုတ်ကတွတ်တွတ်ရွတ်ဆိုကြည်နူးခဲ့ရ သည်။
နောင်အခါတွင် စာမေးပွဲအောင်ဖို့ ၊ စာတမ်းရေးဖို့၊ ဆောင်းပါးရေးဖို့ အစရှိသောကိစ္စများအတွက် ကျယ် ကျယ်ပြန့်ပြန့်လေ့လာရန်အကြောင်းများနှင့်ကြုံရသည်။
ကဗျာ၏အရသာကိုချိူမိန် ကြည်နူးခြင်းသည်အခြေခံဖြစ်သည်ဟု ယူဆပါသည်။
မည်သည့်ကိစ္စမဆိုဆောင်ရွက်စရာရှိလျှင် ၀ိတက်-၀ိစာရ-ပီတိ-သုခ-ဧကဂ္ဂတာ ဟူသောအဆင့်ငါးဆင့် ဖြင့်တက်ရသည်။
ဥပမာ-ကဗျာတပုဒ်ကို ဖတ်ရှူရွတ်ဆို၍ စိတ်အာရုံထဲမှာ သွင်းလိုက်ရမည် (၀ိတက်) ထိုသို့ စိတ်အာရုံထဲ၌ သွင်းထားသောကဗျာကိုထပ်ခါတလဲလဲရွတ်ဆိုပွားများ အာရုံကျက်စားရမည် (၀ိစာရ) ထိုသို့ပွားများသော အခါနှစ်သက်ကြည်နူးအရသာပေါ်လာမည်(ပီတိ)ထိုသို့ကြည်နူးအရသာပေါ်၍နှစ်သက်ခြင်းဖြစ်ကာ ချမ်းသာ လာမည် (သုခ) ထိုသို့နှစ်သက်ကြည်နူးချမ်းသာနေသောအရသာပေါ်၌စိတ်အာရုံတသားတည်း တထပ် တည်းကျကာတခြားဘယ်ကိုမှစိတ်မရောက်ပဲတည်တံ့လျက်နေမည်(ဧကဂ္ဂတာ)ဤသည်ပင်ကဗျာ၏အရသာ ပြည့်စုံပေလိမ့်မည်။ဤနေရာ၌ထပ်ပြောလိုပါသေးသည်။မည်သည့်အမူကိစ္စကိုပြုသည်ဖြစ်စေ မည်သည့်ပညာကိုလေ့လာသည် ဖြစ်စေ ထိုဈာန်အင်္ဂါ ၅ ပါးကိုပြည့်စုံမှသာလိုရာပြီးင်္နိုင်ပေမည်။ ထိုဈာန်အင်္ဂါ ၅ ပါးမှာဘယ်နေရာမဆိုအသုံးချ နိုင်သည်။ ဖော်မြူလာတစ်ခုဖြစ်ပေသည်။
အင်္ဂလိပ်စာတတ်လိုသော် နှင့် စာအုပ်စင်ကျေးဇူး မှ အင်္ဂလိပ်ဆရာကြီးဦးခင်မောင်လတ် ၏ အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေးနှင့်ပတ်သက်သော အကြောင်းများကို ဖတ်ပြီးသွားတဲ့အခါ ငွေစင်ရော် အနေနဲ့အောက်ပါအချက် ၃ ချက်ကို ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မိကြောင်းပါ။
နံပတ်(၁) အမျိူးသားကျောင်းတွေအကြောင်း-“အမျိူးသားကျောင်းဆိုတာ၁၉၂၀ခုနှစ်ဗြိတိသျှအစိုးရ၏ University အက်ဥပဒေကိုကန့်ကွက်တိုက်ဖြတ်တဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများနှင့်ပြည်လုံးကျွတ်ကျောင်း သား ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ boycottဘွိုင်းကောက်သပိတ်ကြီးကမွေးဖွားလိုက်တဲ့ကျောင်းများဖြစ် တယ်။--‘ကျွန်ပညာအလိုမရှိ’ ဟူသောကြွေးကျော်သံနှင့် CNE (ခေါ်) Council of National Education က အမျိူးသားပညာရေးစံနစ်သစ်ကိုဖန်တီးပြီးကိုယ့်စာမေးပွဲနှင့်ကိုယ် စီမံကွပ်ကဲသောကျောင်းများ ဖြစ်တယ်။ အများပြည်သူတို့ရဲ့အလှူငွေနဲ့ရပ်တည်နေတဲ့ကျောင်းဖြစ်တယ်။ ”
နံပတ်(၂) အမျိုးသားကျောင်းမှာသင်ကြားနေသောဆရာများအကြောင်း-“ပညာသင်ရင်းတန်းလန်းကျောင်း ဆရာဖြစ်ကြရလို့ မည်သည့်ဆရာမှဆရာဖြစ်လက်မှတ်မရကြပါ။အသင်အပြကတော့အလွန်ကောင်းကြပါ တယ်။ဆရာတွေရဲ့ကြိမ်လုံးဟာယောင်္ကျားလေး မိန်းခလေးမျက်နှာမရွေးပါဘူး။သူတို့ပင်ပင်ပန်းပန်းစာသင် နေသည်ကိုကြည့်၍တပည့်များစိတ်မကောင်းတောင်ဖြစ်ရပါတယ်။တချိူ့ဆရာများဟာမြန်မာလိုတခွန်းမှမ ပြောပဲအင်္ဂလိပ်လိုပြောသင်လို့မြန်မာစကားတောင်တတ်ရဲ့လားလို့အချင်းချင်းအငြင်းပွားကြရပါတယ်။”
နံပတ်(၃) ပညာသင်ကြားပုံ စံနစ်- “အတန်းကိုအဆင့်လို့ခေါ်ပါတယ်။တတိယအဆင့်မှအစပြု၍စာပိုဒ်တစ် ပိုဒ်ကို တယောက်စီအလှည့်ကျဖတ်-မရေတွက်နိုင်အောင်ဖတ်-မထစ်မငေါ့ပဲဖတ်နိုင်သည်အထိကျောင်း သားတိုင်းနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖတ်ကြရပါတယ်။အင်္ဂလိပ်မှမြန်မာ မြန်မာမှအင်္ဂလိပ် ဘာသာပြန်လေ့ကျင့်ခန်း တွေလုပ်ရပါတယ်။ရာဇ၀င်၊ပထ၀ီ၊သင်္ချာ စသောအခြားသော ဘာသာရပ်များကို အင်္ဂလိပ်လိုသင်ရပါတယ်။ ကျောင်းဆင်းချိန်မှာဆရာကအင်္ဂလိပ်ကဗျာတွေထဲတပုဒ်ကိုရွေးပြီးဆရာကအစဖော်ပေးလိုက်ရင်ကျောင်း သားတွေကဆက်ဆိုရပါတယ်။ဥပမာ- Lord Ullin’s daughterရဲ့ကဗျာရဲ့အစ A Chieftain to the Hilandbound ဆရာကအစချီလိုက်တာနဲ့ ကျောင်းသားတွေအော်ဟစ်ဆက်ဆိုရပါတယ်။ ကဗျာအဆုံးအ ထိရွတ်ပြဲီးမှ အိမ်ပြန်ရပါတယ်။အဲဒီအရသာဟာဘာနဲ့မှလဲနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး......။”
ဦးခင်မောင်လတ် MA ၁၉၇၉ ဒီဇင်ဘာလ
သြော်....ထိုခေတ်ကကျောင်းသားများ..ရိုက်အသင်ခံရသလို..မတတ်မနေရ..မတတ်ချင်လို့ကိုမရ ရလောက် အောင် ပညာတတ်မြောက်ကြသည့်အကြောင်းများပေပဲလို့ ခံစားလိုက်မိကြောင်းပါ်.......။
၂၀၀၄ နိုဝင်ဘာလ ကလျာ မဂ္ဂဇင်း တွင်ဖော်ပြခဲ့သော လူထုဒေါ်အမာ ၏ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်များ ဆောင်းပါးမှ ဖြစ်ပါသည်။
ငါ့သား ငါ့သမီး တို့လည်းအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားကြကွယ်၊။ အမေတို့လူကြီးတွေမှာ ခုနေခါ ခွန်အားလည်းမရှိတော့ မာန်မာနတွေလည်း လျော့ကျကုန်ပြီမို့ ဘ၀ကိုလက်မြှောက်အရှုံးပေးပြီးလားလို့ မေး ရင်တော့လည်း ဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးပါဘူး။ အမေတို့မှာ အသက်ကြီးတာမှန်တယ်။ အသက်ကြီးတဲ့အတွက် သူများထက်အတွေ့အကြုံပိုများတယ်။ အဲဒီကိုယ်တွေ့တွေဟာ ဘယ်အရာနဲ့မှမလဲ နိုင်တဲ့အဖိုးတန်ရတနာတွေပဲ။ ဒါကြောင့် ငါ့သားတို့ ငါ့သမီးတို့ ကိုယ်အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရရင် ဒါမျိုးတွေကို အကြိမ်ကြိမ်ကြု့ခဲ့ဖူးတဲ့ လူကြီးမိဘတွေဆီက အကြံညဏ်တောင်းပါ။ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။ သေ တယ်ဆိုတာကတော့ သေခြင်းတရားကိုး။ ဇာတိ၊ ဇရာ၊ ဗျာဓိ၊ မရဏ တဲ့။ ဒါဟာ သတ္တ၀ါတိုင်းရင်ဆိုင်ရမည့် ကိစ္စ။
၂၀၀၆ ခုနှစ်လောက်ကထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ အောင်စုဂျာနယ် မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ မဟတ္တမဂန်ဒီ ရဲ့
First, they ignore you, then
they laugh at you, then
they fight you, then you win.
ပထမ သူတို့ကသင့်ကိုလစ်လျူရှုသည် ထို့နောက်
သူတို့က သင့်ကိုပျက်ရည်ပြုကြသည် ထို့နောက်
သူတို့က သင့်ကိုတိုက်ခိုက်ကြသည် ထိုအခါ သင်နိုင်ပြီ။
သမ္မတ ကနေဒီ ၏ မိန့်ခွန်းဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းပြည်ကသင့်အတွက်ဘာလုပ်ပေးမလဲဟုမမေးပါနှင့်၊ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွက်သင်ဘာလုပ်ပေးနိုင်သလဲ ဆိုတာကိုပဲမေးပါ။
“Common enemy for the people are tyranny, poverty and diseases , and war.”
လူသားတွေအတွက်ဘုံရန်သူဆိုတာဟာ အာဏာရှင်စံနစ်၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှု နှင့် ရောဂါဘယရယ် ပြီးတော့ စစ် ရယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
The end of poverty(Jefffrey Sach) စာအုပ်ထဲမှာ ရော့အဆိုတော် ဘိုနို ရဲ့ နိဒန်းပါ။ အဲဒီထဲက မှတ်သားစရာတစ်ခုပါ။
‘ကျွန့်တော့်ကိုယ်ကျွန်တာ် မိတ်ဆက် မယ်၊ ကျွန်တော့် နံမယ် ဘိုနို’ ဆိုတဲ့ အဆိုတော်ရဲ့ အမြင်ကဒီလိုပါ။
“ကျွန်တော်တို့ကသာရိုးသားဖြောင့်မတ်ရင် ဒီလိုနေ့စဉ်နှင့်အမျှ သေကြေပျက်စီးတာတွေ နေရာအနှံ့မှာ ဖြစ်ပွားနေတာတွေအတွက် အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်ရလိမ့်မယ်၊ မြောက်အမေရိက၊ ဥရောပ၊ ဂျပန်၊ မှာမှမဟုတ်ပါဘူး။ တိုက်တွေအကုန်လုံးပေါက်ကွဲပြကြည့်ပါလား၊ ကျွန်တော်တို့ကသာ အမှန်တကယ်ပဲစာနာ ပြီးလက်ခံပြမယ်ဆိုရင် ဒီလောင်ကျွမ်းနေတဲ့မီးကို တကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ငြိမ်း သတ်နိုင်ပါပြီဗျာ။ဒါဟာ မသက်မသာနဲ့လက်ခံလိုက်ရတဲ့အမှန်တရားပါပဲ။”
အဲဒီနိဒါန်းအပြည့်အစုံကိုဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အမှတ် ၁၈၄ (၂၀၀၇) အတွေးအမြင် မဂ္ဂဇင်း က ဂျူနီယာဝင်း ရဲ့‘ဆင်းရဲတွင်းနက်နေသူများဆောင်းပါး’ ကိုပဲရှာဖတ်လိုက်ပါလို့ အကြံပေးလိုက်ကြောင်းပါ။
Posted by Junior Win at 12:42 AM
Selection article - juniorwin
selection5- article -juniorwin